ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၌ ဓားပြများ သောင်းကျန်းနေ | ဧရာဝတီ
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၌ ဓားပြများ သောင်းကျန်းနေ
နန်းဆိုင်နွမ်| January 9, 2013 | Hits:2,343
4 | | မူဆယ်-မန္တလေး လမ်းပေါ်တွင် တွေ့ရသည့် ကုန်များတင်၍ သယ်ဆောင်သွားနေသော လူစီးယာဉ် တစီး (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဓားပြတိုက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီး အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၏ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူမှု အား နည်းသည့်အတွက် ဒေသခံများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ဓားပြတိုက်မှုများသည် ယမန်နှစ်ကစတင်၍ သိသာစွာ ဖြစ်ပွားလာရာ ယခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုများပြားလာကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ သမားများ၊ တရုတ်ငွေ လှဲလှယ်သူများ၊ ကားသမားများနှင့် ရွှေဆိုင်များကို ပစ်မှတ်ထား လုယက်ပြီး လူသတ်မှု ကျူးလွန် သည် အထိ ရဲတင်းစွာ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် နေထိုင်သည့် ဦးစိုင်းမြတ် က ဧရာဝတီ သို့ ပြော သည်။
“ဒီရက်ပိုင်း မူဆယ်မှာ ဓားပြမှုက ၂ခုရှိတယ်။ တခုကတော့ ကားသမားကို လုယက်ပြီး ရိုက်တယ်။ နောက်တခုကတော့ တရုတ်ငွေ လဲတဲ့ အမျိုးသမီးကို လုယက်ပြီး သတ်သွားတယ်။ မူဆယ်မှာတော့ အမြဲတမ်းဖြစ်နေကြပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဓားပြတွေကို မဖမ်း မိဘူး”ဟု ဦးစိုင်းမြတ်က ပြောပြသည်။
အဆိုပါ တရုတ်ငွေ လဲလှယ်သည့် အမျိုးသမီး တရုတ်ပြည်မှ မူဆယ်သို့အိမ်အပြန် ညနေ ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် လမ်းပေါ်၌ ရပ်စောင့် နေ သည့် လူ ၂ ဦး က ပါလာသော ငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀၀ နီးပါး ကို လုယူပြီး သတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ရဲတွေက လမ်းထောင့်တွေမှာတော့ လုံခြုံရေး ကင်း စောင့်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓားပြတွေဆီမှာ သေနတ်တွေပါတယ်။ ရဲ တွေက သေနတ်ရှိပြီး ပစ်မိန့်မရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကို ဘာအားကိုးရမှာလဲ”ဟု ဦးစိုင်းမြတ်က ဆက်ပြောသည်။
ယခု ဓားပြမှုသည် လူများသည့် မူဆယ်ဈေးနေ့တွင်ဖြစ်ပွားပြီး အစိုးရချထားပေးသည့် လုံခြုံရေးအားနည်းသည့်အတွက် ဒေသခံများ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
“အခုဆိုရင် အိမ်ကို စောပြန်ရတယ်။ ပြန်ရင်လည်း တယောက်တည်း မပြန်ရဲဘူး။ ဓားပြတိုက်မှုတွေက ဘယ်သူတွေဆိုတာ တခါမှ မဖမ်းမိတော့ ကြောက်တယ်။ ဆေးသမားလား ၊ လောင်းကစားသမားလား မသိဘူး”ဟု မူဆယ်ဒေသခံ တရုတ်ငွေ လဲလှယ်သည့် အမျိုးသမီးတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လတ်တလောတွင် ဒေသခံများကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေး ကင်းစောင့်နေရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်လည်း ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများနှင့် ကားသမားများကို လုယက်ဓားပြတိုက်မှုများ မကြာ ခဏ ဖြစ်ပွားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ဒီတပတ်ဆိုရင် နေရာတိုင်းလိုလို ရဲတွေက စစ်ဆေးနေတာတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ လုပ်သွားတဲ့သူတွေက တရုတ်ပြည် ဘက် တောင် ရောက်နေ လား မသိဘူး။ အခုမှ စစ်ဆေးနေတော့ရော ဘာထူးမှာလဲ”ဟု မူဆယ်၌ နေသည့် တရုတ် ဘာသာပြန် အမျိုးသမီး တဦးက ပြောဆိုသည်။
ဓားပြတိုက် လုယက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မူဆယ် ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာမှတာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ လုံခြုံရေးကိုလည်း တင်းကျပ်စွာ တာဝန်ယူထားကြောင်း၊ အဖြေမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ယမန်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ကလည်း မူဆယ်မြို့ရှိ စံပယ် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် သားအမိ နှစ်ဦး ဓားပြတိုက် ခံရပြီး တဦးသေဆုံး၍ ကာလ တန်ဖိုးငွေ ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ခန့် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
၉၆၉ တရားပွဲများ အပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်မည်ကို တောင်ကြီးဒေသခံများ စိုးရိမ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment swe htwe January 9, 2013 - 11:43 pm	We think CCTV should be in all cross-roads to prevent crimes. Local authorities don’t interest in this. They only interested how to get money from cronies and mafias.
Reply	Salai Lian January 10, 2013 - 4:12 am	Robbery and dacoity have been committed by soldiers and policemen. People from northern part of Shan State will tell the world that who really committed these crimes sooner or later. Soldiers rape women(even married women) at gunpoint. SWAN newsletters tells us all stories about this issue clearly. I might rather lose my silver and gold but I will never ever lose the life of my mom and the lives of my sisters to these thugs as long as I live. As long as the people have no power on their own lands, this crime will keep going on and on. That’s why self-determination is so important.
Reply	မင်းသူ January 30, 2013 - 12:14 am	ကြည့်မဘူးဗျား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
Reply	မင်းသူ January 30, 2013 - 12:25 am	ကွန်းမန့်ကို မြန်မာလိုရေးမှ လား? English လိုရေးမှလား? တင်ပေးမှက ဘယ်ဟာကိုရေးပေးရမလဲ ?